Software Download - မင်္ဂလာပါ! ဝေယံလင်း၏ Website မှကြိုဆိုပါတယ် !
USB Disk Security 6.0.0.126 (နောက်ဆုံးထွက် version)
9:59 PM ညီနေမင်း
hippo87@gmail.com : ကိုညီနေမင်း ကျွန်တော့်ကို USB Disk Security 6.0.0.126 full version လေး မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးလို့ရရင် ပို့ပေးပါနော်.....
ညီလေးရေ အစ်ကို တင်ပေး လိုက်ပြီနော် . မေးလ်ထဲကိုတော့ အစ်ကို အခုအချိန် အထိ ဘယ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမှ software မပို့ခဲ့ဖူးပါဘူး . တစ်ယောက်ကို ပေးရမယ့် အချိန်ကို ၀ဘ်ဆိုက်မှာ ပို့စ်တင်လိုက်ရင် လူအများကြီး Download လုပ်လို့ ရသွားမှာဖြစ်လို့ ၀ဘ်ဆိုက်မှာပဲ ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အထဲမှာ crack ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .
(၁) USBGuard setup.exe ဖိုင်ကို install လုပ်လိုက်ပါ .
(၂) USBGuard.exe ဖိုင်ကိုကျတော့ "C:\_Program Files\_USB Disk Security\_USBGuard.exe" ဖိုင် location ထဲကို copy ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ . သုံးတတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အရင်ကလဲ crack တို့ keygen တို့ သုံးနည်းတွေ ရေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ် .
10:59 PM ညီနေမင်း
လာပြီဗျို့ Kaspersky Internet Security 2011 လေးနော် ရောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး Free ပေးတာပါ Kaspersky ချစ်သူများ အတွက် ကျွန်တော် Kaspersky Internet Security 2011 ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ် အသစ်လေးနော် ဘယ်လိုကွာသလဲ ဆိုတာသိရအောင် စမ်းသုံးကြည့် လိုက်ပါ ကျွန်တော်တောင် မသုံးရသေးဘူး ရရချင်း တင်ပေးလိုက်တာပါ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ. အဆင်ပြေပါစေ။ 101.97mb
2:32 PM ညီနေမင်း
kozawlatt30780@gmail.com "ကိုညီနေမင်းခင်ဗျား google earth pro ရဲ့ email နဲ့ linsced Key လေးရချင်လို့ပါ ကျေးဇူးပြုပြီးပေးပါဦး"
9:10 PM ညီနေမင်း
ကွန်ပျူတာအတွက် မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်များ ဖျက်ပစ်ခြင်း registry များထဲတွင် virus ကြောင့် မှားယွင်းနေသည်များကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ Hard Dive ထဲရှိဖိုင်များအား ပြန်စီပေးခြင်း။ system error များအား ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးခြင်း စသည့် စွမ်းဆောင် ချက်များကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
12:30 PM ညီနေမင်း